iOS 14.5 Beta 1 inobvumidza iwe kuvhura yako iPhone ne mask kana iwe ukapfeka iyo Apple Watch | IPhone nhau
Rimwe rematambudziko anoshungurudza ekuzivikanwa kumeso pane iyo iPhone rinotanga kugadziriswa neBeta 1 nyowani yeIOS 14.5, uye ndizvozvo ikozvino neApple Watch unogona kuvhura yako iPhone kunyange wakapfeka mask.
Kubva kutanga kwe COVID-19 denda rinenge gore rapfuura, kumeso kwechiso (Chiso ID) cheiyo iPhone kwave kushungurudza kukuru, nekuti sisitimu yacho haigoni kuona kumeso kwako zvakakwana kuti ikuzive uye nokudaro kukwanisa kuvhura iyo iPhone , zvakadaro neBeta yekutanga yeIOS 14.5 ye iPhone uye yeiyo watchOS 7.4 yeApple Tarisa izvi zvinogadziriswa, zvichibvumira Kana iwe ukapfeka iyo Apple Watch uye kuvhura yako iPhone ine mask iri, iyo system inokutendera iwe kuvhura yako iPhone, zororo chairo.
Sisitimu iyi ichashanda nenzira yakafanana nemaMac akavhurwa neApple Watch, uye kuchengetedzeka kwayo hakuzokanganisike, nekuti mamiriro akati wandei anofanirwa kusangana kuti izvi zvishande nemazvo. Chekutanga ndechekuti iwe unofanirwa kutakura iyo Apple Watch uye iivhure, uye yechipiri ndeyekuti iyo iPhone inofanira kuziva kuti iwe wakapfeka mask. Kana aya mamiriro akazadzikiswa, hauchazofaniri kudzikisa mask yako kana kuisa kodhi yekuvhura, chimwe chinhu isu tanga tatova kupfuura zvataimboita uye izvo zvakadzora kunyaradzwa kwehurongwa hwakaratidza kuve hwakachengeteka uye nekukurumidza. ne COVID-19 yaive nhamo chaiyo kune vashandisi ve iPhone.
Parizvino ndiyo yekutanga Beta yeIOS 14.5, saka isu tichafanirwa kumirira iyo yepamutemo vhezheni kuti isunungurwe kune wese munhu kuti aone kuti zvinoshanda sei kana kutikurudzira kuti tishandise iyo Yekuvandudza Beta kana iyo Ruzhinji Beta (painowanikwa). Kumirira kuti uone kana iyo inotevera iPhone 13 ichisanganisira chigunwe chigunwe chakabatanidzwa muchiratidziri kana mubhatani remagetsi, muchimiro chePad Air Air, iyi inogona kunge iri mhinduro yakanakisa yedambudziko rinokonzerwa nekushandiswa kwemask.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » IOS 14.5 Beta 1 inobvumidza iwe kuvhura yako iPhone ne mask kana iwe ukapfeka iyo Apple Watch
Xiaomi inozivisa ine chinzvimbo kure isina waya charger